Ukusekwa kweefowuni ezili-10 ezinamandla ngoSeptemba 2018 | I-Androidsis
Enye yeebenchmark ezaziwa kakhulu, ezaziwayo nezithembekileyo kwihlabathi le-Android, ngaphandle kwamathandabuzo, AnTuTu. Kwaye, kunye neGeekBench nabanye, oku kuhlala kubonakala kuthi njengebhentshi ethembekileyo esithatha kuyo njengendawo ekubhekiswa kuyo kunye nenkxaso, kuba isinika ulwazi olufanelekileyo xa kusenziwa ukwazi ukuba inamandla kangakanani, ikhawuleza kwaye isebenza kakuhle iselfowuni, nokuba yeyiphi na.
Njengesiqhelo, I-AnTuTu ihlala yenza ingxelo yenyanga okanye, endaweni yoko, uluhlu lweetheminali ezinamandla kwimarike, inyanga nenyanga. Ngeli xesha, sinotshintsho oluphawulekayo malunga Uhlobo lokugqibela luka-Agasti. Siyakwandisa!
Olu luhlu lutyhilwe kutshanje Kwaye, njengoko siqaqambisa, yeyowe-Septemba ophelileyo, yiyo loo nto i-AnTuTu inokubeka oku kwinqanaba elilandelayo kulenyanga esiza kulibona ngoNovemba. Nazi ii-smartphones ezinamandla kakhulu ngoSeptemba kulo nyaka, ngokwe-AnTuTu Benchmark:
Njengoko sibona kakuhle kuluhlu, el Xiaomi Black Shark qhubeka ukhokele itafile, ngeli xesha, ngamanqaku angama-293.009. Oku kulandelwa ngu Meizu 16, ngamanqaku angama-292.000 kunye Asus ROG Ifowuni, efumene amanqaku angama-291.217. Lilonke, le trio igqwesa kwezinye eziphezulu, ezinje nge-Oppo R1, ebhalise ngamanqaku angama-290.827 kwaye ihleli kwindawo yesine. Naye washiya ngasemva Ndihlala NEX, eyafikelela kumanqaku angama-287.971, ngaloo ndlela yahlala kwindawo yesihlanu, nase- Xiaomi Mi 8 Pro, ebekwe kwindawo yesithandathu ngamanqaku angama-286.636.
Ngokubhekiselele kwezinye izithuba, indawo yesixhenxe iya ku Xiaomi Mi 8 uHlelo lokuHlola ngamanqaku angama-286.143 kunye nesibhozo i-OnePlus 6 ngamanqaku angama-286.006. Emva koko kulandela i Oppo Khangela X ngamanqaku angama-284.695 kwisithoba, ngelixa u Xiaomi Mi 8 ihlala ikwindawo yeshumi kunye neyokugqibela kwinqanaba nge-283.117.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ezona Fowuni zinamandla zi-10 zikaSeptemba 2018, ngokwe-AnTuTu Benchmark
Uyenza kanjani ukuba i-USB isebenze kwifowuni yakho ye-Android